12V Portable Car agụụ Cleaner - China Abd Industrial
12V Portable Car agụụ Cleaner
Download ka PDF Send email anyị
Product aha 12V Portable Car agụụ Cleaner
Product ibu 500.00g
Product si Ningbo, China
Akporo nke eji ụgbọala were
Line ogologo 160cm
ojiji ndapụta Akọrọ na mmiri sọrọ-eji
ọzọ ọrụ mmiri uptake
agba White / Blue
kọmpat na fechaa
Ji kpọmkwem site ụgbọ ala Mkpa ọkụ anya
Complete na-adaba adaba na-ekekọta na keosusu nyo
achịkwa ON / Gbanyụọ mgba ọkụ, mfe iji.
Ọ bụrụ na ị nwere a sịga Mkpa ọkụ plọg, uwe n'ụlọ, ụlọ ọrụ, njem na niile ugbo ala
Ike na inogide ikuku mmiri maka ezinụlọ na ọrụ saịtị ojiji ka a kacha obere ikuku ike. Great maka ikuku mgbasa, ihicha kapet ndị ọzọ dee mmiri na-ebupụta! Wet / kpọrọ nkụ Car Vac wereziiri 5.5 FL oz of liquid.Upholstery ngwá ọrụ na ájá ahịhịa na-zuru okè n'ihi na wepụ Pita ntutu, lint na unyi si a ụgbọala interior.Crevice ngwá ọrụ esịmde n'etiti ụgbọ ala seats.Lightweight na bagless maka convenience.Great maka ngwa ihicha nke wụsara n'ala na ala ụgbọ ala gị, ụgbọala ma ọ bụ SUV.
★ Ike mmiri & ala mkpọtụ: The ụgbọ ala agụụ nwere OA, RoHS Asambodo. 12volt, 120w, 4000PA mmiri. 75db ala mkpọtụ. Nwere ike n'ụzọ dị irè ọcha ájá n'ime ụgbọ ala.
★ MULTIFUNCTIONAL: The ụgbọ ala agụụ na-akwado kpọrọ nkụ & Wet ngwa. 3 ngwa (Long n'Ọnụ, ahịhịa, Soft Long tube), na-enyere aka ọcha na akpati nwere ike ihicha n'akụkụ ọ bụla na ala ụgbọ ala gị. Ọ bụla ụgbọ ala kwesịrị inwe otu!
★ oké ọrụ DESGIN: Akwa arụmọrụ ụgbọ ala agụụ e mere na ị na n'uche. Na agụụ na-adị mfe jide, ojiji, ma dị ọcha. The unyi tragaasi emepe na push nke a button na empties si na sekọnd. The gụnyere HEPA ikuku nzacha ndị keosusu na mfe iji wụnye.
★ adaba iji: 4.5M (16.4 Ft) ike ụdọ na-enyere aka ọcha ọ bụla na-esi ike iru ebe. Mfe iji rụọ ọrụ: Dị na ịgbanwuo / anya. Fanye sịga Mkpa ọkụ plọg n'ime bụla DC 12-volt sịga Mkpa ọkụ sockets (ụgbọala na ụgbọ mmiri) Ọ na kwadoro site na gị sịga Mkpa ọkụ nke ụgbọ ala.
★ MKPA mara: Biko na-ezumike nke 3 nkeji oge ọ bụla mgbe minit 15 nọgidere na-arụ ọrụ, Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ase, biko egbula kpaliri anyị, anyị ga-enye gị a nzaghachi n'ime 24 awa.
Pro-naa usoro -Ndị ájá dị anya n'ebe iyo.
Bagless imewe nwere uru nke ihicha.
Dual akara nke mkpọtụ.
Kwadebenụ na dị iche iche dị ọcha ngwaọrụ izute dị iche iche ihicha mkpa.
Shimono agụụ Cleaner ọ bụ ezie na obere ma ike mmiri ike.
Shimono agụụ Cleaner dị mfe iji, dị ọcha na nchekwa.
Pro na naa na mba patent.
Ọ bụla na agba nwere ike họrọ unu kpamkpam n'ihi na ị.
Anyị ga na-online ọ bụla na-arụ ọrụ ụbọchị.
Anyị ga-aza gị email na fax n'ime 24 awa.
I nwere ike na-akpọ anyị n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na anyị na ngwaahịa
Battery Ejikwara Car agụụ Cleaner
Car Saa agụụ Cleaners
Handheld agụụ Cleaner N'ihi Car
Mini Car agụụ Cleaner
Mini agụụ Cleaner
Mini agụụ Cleaner N'ihi Car
Kasị Ike Car agụụ Cleaner
rechargeable Portable Mini agụụ Cleaner
agụụ Cleaner N'ihi Car
agụụ Cleaner N'ihi Car nhicha Ngwá Ọrụ
agụụ Cleaner N'ihi Home Na Car